Sidee ku heshiin karaan Soomaaliya iyo Somaliland? - Caasimada Online
Home Maqaalo Sidee ku heshiin karaan Soomaaliya iyo Somaliland?
Sidee ku heshiin karaan Soomaaliya iyo Somaliland?
Somaliland oo Soomaaliya inteeda kale ka go’day ku dhawaad 30 sano waxaa jiray wada hadalo kala duwan oo Dowladda Soomaaliya ay wada galeen kuwaa oo ku soo dhamaaday fashil.
Dowladda Federalka Soomaaliya ee uu hogaamiyo Madaxweyne Maxamed Cabdullahi Farmaajo waxa ay dhowr jeer sheegtay in wada hadal toos ah maamulkiisa uu la geli doono Maamulka Somaliland, halka Madaxwenaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi uu sheegay in Midowga Soomaaliya ay muhiim tahay balse la joojiyo hadalada xanafta leh sida uu ka sheegay Munaasabii 26-ka Juun oo ku beegneyd markii gobalada Waqooyi ay ka xuroobeen gumeystaha.
Waa in laga fogaadaa wax walba oo keeni kara horin colaadeed gaar ahaan hadalada xanafta leh ee ka soo yeera mas’uuliyiinta iyo maamulalada labada dhinac.
Soomaalida oo wax walba wadaagta sida Diin, dhaqan, Af iyo luuqad waa in ay wax kabarataa dalalka deriska la ah Soomaaliya oo soo afjaray khilaaf muddo ragaadiyay dowladnimadooda, sida Kenya oo waxaa heshiiyay Raila Oding iyo Uhuru Kenyatta oo muddo khilaaf ka dhextaagnaa , waxaa sidoo kale colaadoodii soo afjaray Mucaaradka Iyo Madaxda Koofurta Sudan, sidoo kale dalka Itoobiya.
Waa in Madxaweynaha Jamhuuriyadda Federalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullahi Farmaajo uu ka dagaa Magaalada Haregysa ee Maamulka Somaliland isaga oo si hoose u dhageysanaya tabashada iyo waxyaabaha ay tirsanayaan Maamulka Somaliland si loo midoowo.
Soomaaliya oo dib u heshiisa waxa ay soo ceshan kartaa sharaftii iyo karaamadii ay ku laheyd caalamka intiisa kale.
W/Q: Cabdicaziz Xasan Ibraahim